5 Unofanira-Ona Dhijitari Yekutsikisa Mienzaniso | Martech Zone
5 Unofanira-Ona Dhijitari Yekuburitsa Mienzaniso
Chitatu, September 19, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu tanga tichiedza nemutengi wedu, Zmags, kune vamwe vatengi uye muoni wavo wakanyanya kutonhorera. Ini ndaida kuratidza mimwe mienzaniso ye, izvo zvandinotenda, ndeimwe inoshamisa inofambidzana manyorerwo edhijitari! Kuti uzarure muoni, ingofa pikicha yemuoni!
Vatengi veZmags Commerce Pro chigadzirwa vari kuona zviitiko zvinoshamisa, zvinosanganisira a 5x kuwedzera muma peji maonero, 2x nguva yakashandiswa pane saiti, kusvika pa 2x simudza mukutendeuka kwemitengo uye 55% kuwedzera muavhareji odha kukosha!
CVS Kuchengetedza - vhidhiyo, mapeji anofambidzana… kuratidzira kunopenya!
Mukati Packaging - kurudyi ruoko zvese zvakapfuura zvinyorwa!
Kudya kwanhasi uye Kudya - anokunda muDMA Dhijitari Magazini Makadhi, iyi inowirirana yedhijitari magazini inofanirwa kuona… ine yekudyidzana kushambadzira uye yakadzamidzirwa mavhidhiyo.
Cell C Magazini - akasiyana chaizvo mashandisiro edhijitari anoshanda kushambadzira. Tarisa uone Just yeVakomana, Yevasikana chete sarudzo papeji 10!
Vamwe vatengesi vari kushandisa iyo dhijitari kuburitsa yakananga yavo saiti! Tarisa uone Dick's Sporting Goods 'Lookbook… zvakanyatso kubatanidzwa neecommerce system yavo, muoni anoratidzira zviono zvinofambidzana. Dzvanya pane + chiratidzo uye iwe unogona kuwedzera chinhu chakananga ku ngoro yako yekutengera!
Chimwe chinhu chinonakidza cheZmags ndechekuti iwe unogona kupinza kodhi yako yeGoogle Analytics UA uye chaizvo kuyera mashandisiro uye kudyidzana kwebhuku rako redhijitari.
Tags: digital magazinikudhindwa kwedhijitaridigitaalinen kutsikisa chikuvamagazini inofambidzanamagazini yekutengesamagazini ecommerce